किन आए उपेन्द्र यादव सप्तरी? « Naya Page
किन आए उपेन्द्र यादव सप्तरी?
काठमाडौं : संविधानसभाका दुइटै निर्वाचन उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्षका हैसियतले लडे। यसपालि संघीय समाजवादी फोरमका नाममा भिड्दै छन्। पहिला मोरङ र सुनसरीबाट प्रतिस्पर्धा गरेका उनी यसपालि सप्तरी आइपुगेका छन्। भूमि र भूमिका बदल्दै राजनीतिमा छलाङ मारिरहेका यादवको आगमनले सप्तरी २ मा चुनावी माहोल तताएको छ। राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनेका उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य दल र उम्मेदवारले पनि गहन गृहकार्य गरिरहेका छन्। यसले चुनावी माहोल थप रोमाञ्चक बनेको छ। जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा भन्दा यसमा बढ्ता ‘चुनाव लागेको’ झल्को मिल्छ। यो खबर अखण्ड भण्डारी, अबधेश झाले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
यादवको राजनीति एकप्रकारको यात्रा हो। अध्यापनको ‘पार्टटाइम’ उपयोग गर्दै ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामक गैरसरकारी संस्था खोलेका उनले अन्तत: त्यसैलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर दलको स्वरूप दिए। उनको राजनीतिक रेखा सेयरबजारजत्तिकै वक्र छ– कहिले उकालो, कहिले ओरालो। चुचुरामा टेकेर राजनीतिक पथमा लागेका उनी बीचमा एकपल्ट झन्डै ‘आधार शिविरमै’ आइपुगे। स्थानीय तह चुनावको परिणामले क्रमश: तंग्रिएका छन्। यो निर्वाचनमा राजपासँगको गठबन्धनका कारण पुन: मधेसमा अग्रपंक्तिमा चर्चामा छन्। प्रदेश २ मा तपाईंको दलको अवस्था के हुने आकलन गर्नुभएको छ ? सोध्न नपाउँदै भने, ‘हामी ठूलो दल बन्छौं, हाम्रो गठबन्धनले यस प्रदेशमा बहुमत ल्याउँछ।’
ठाकुरले सप्तरी २ को बाढीको समस्यादेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, आर्थिक विपन्नता र बेरोजगारीको अवस्थालाई आफूले नजिकबाट हेरेकाले समाधान पनि दिन सक्ने दाबी गरे। ‘सप्तरीमा मधेस आन्दोलनका क्रममा जनता गोली खाएर मारिइरहँदा, बाढीले गाउँबस्ती डुबेर जनताको बेहाल हुदा कहाँ थिए उपेन्द्र ?’ उनले प्रश्न गरे। तत्कालीन तमलोपाको सहमहामन्त्री भई ठाकुर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरी ३ बाट चुनाव लडेका थिए।
फोरम अध्यक्ष यादवले सुनसरी र मोरङमा आफ्नो अवस्था राम्रो हँ‘दाहँ‘दै सप्तरी आउनुको मुख्य कारण ‘भेदभावविरुद्धको लडाइँ’ भएको बताए। आफ्नो जन्मभूमि सधैं पछि परेको पीडा साम्य पार्न आफूले सप्तरी २ रोजेको उनको दाबी छ। ‘आधुनिक नेपाल निर्माण हुँदादेखि नै राज्यको उपेक्षाको सिकार बन्यो सप्तरी। सुगम र उर्वर भूमि हुँदाहँ‘दै यसलाई पछि पारियो,’ उनले भने, ‘यसको मानव विकास सूचकांक कर्णालीकै हाराहारी छ। त्यसलाई प्रस्ट दृष्टिकोणसहित अघि लैजान मेरो पहल हुनेछ।’ उनले हुलाकी राजमार्गको उदाहरण दिँदै भने, ‘जंगलबाट महेन्द्र राजमार्ग बनाइयो, मानव बस्तीको हुलाकी राजमार्गलाई पन्छाइयो। मधेसप्रति राज्यको भेदभाव हट्नुपर्छ।’ यिनै मुद्दा लिएर आफूले चुनाव जित्ने उनको दाबी छ।